Faah faahin:- Dab aad u xoogan oo xalay ka kacay dekedda magaalada Berbera (DHAGEYSO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dab aad u xoogan oo xalay ka kacay dekedda magaalada Berbera (DHAGEYSO)
Waxaa faah faahin dheeraad ah kasoo baxaysaa dab aad u xoogan oo habeenkii xalay ka kacay qeyb ka mid ah dekadda weyn ee magaalada Berbera ee maamulka Somaliland.
Dabkaasi ayaa la sheegayaa inuu bilawday abaarihii 6.30pm ee salaadii maqribka kadib, waxaana la sheegayaa inuu dabka ka dhashay Konteenaro yaallay gudaha dekedda, waxayna arrinkaasi sababtay inuu dabkaasi sii xoogeysto.
Goobta uu dabka ka kacay oo ahayd meesha loo yaqaano Barxada Wajaale ayaa kaabiga ku haysa haamaha shidaalka Berbera iyo shirkadaha keena gaaska wax lagu karsado.
Maareeyaha dekadda Berbera Axmed Yuusuf Dirir oo la hadlay warbaahinta ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay qaabka iyo xilliga uu dabkaasi bilawday, wuxuuna sheegay inay xalay saqdii dhexe ay ugu dambeyn ku guuleysteen daminta dabkaas.
Dhinaca kale, wuxuu Axmed Yuusuf sheegay in dabkaasi ay waxyeelo kasoo gaartay qaar ka mid ah shaqaalihii ka shaqeynayay dekadda, isagoona sidoo kale tilmaamay inay jiraan qasaare hantiyeed oo dabkaasi ka dhashay.